कुखुराको मूल्य एक लाख ! – RaptiSandesh
Home / Feature Breaking news / कुखुराको मूल्य एक लाख !
कुखुराको मूल्य एक लाख !
दाङ, ३ भदौ । सामन्यतया एउटा कुखुरा कति मूल्यमा विक्छ होला ? त्यसको सहजै उत्तर आउँछ लोकल कुखुरा प्रतिकिलो सात सयसम्ममा बिक्ने गरेको छ । ब्रोइलर कुखुराको मूल्य प्रतिकेजी ३ सयदेखि ३ सय ५० सम्म । त्यस्तै बदिया भालेको मूल्य एक हजारदेखि २ हजारसम्म । तर, दाङमै २० देखि ५० हजारसम्म मूल्यमा कुखुरा विक्ने गरेको सुन्दा छक्क पर्ने हुन्छ । य
४ भाद्र २०७७, बिहीबार ०६:०८
Previous: कांग्रेस महाधिवेशन कार्यतालिका नै प्रभावित, न समयमा समायोजन, न क्रियाशील सदस्यता वितरण
Next: एम्वुलेन्सबाट खसेकी महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु